हामी के भइरहेका छौं त ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण हामी के भइरहेका छौं त ?
on: ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०६:२७ लेख | दृष्टिकोण
शिशै शिशाले ढाकिएको, हावा पनि कतैबाट पनि नछिर्ला जस्तो देखिने घर पनि धूलो मुक्त छैन । हामीले पर्यावरण नबुझेको कि आधुनिकताले अन्धो बनाएको ? हावा पनि छिर्न नसक्ने (एयर टाइट) कोठामा त यस्तो धूलो हुन्छ भने मुखमा मास्क कहाँ र कहिलेसम्म लगाउने ? सुत्दा र खाना खाँदा पनि मास्क लगाउन सम्भव होला ?
पर्यावरण : सडकमा धूलो छ । सडकको किनारामा धूलो छ । घरको भित्ता, छाना, झ्याल ढोका सबैमा धूलो छ । पानी नै पानीले शहर नै नुहाउन पुग्ने मनग्य स्रोत भएको देशमा आकाश नै मैलो हुने गरी धूलो हुँदासम्म यो जनसरोकारको विषय हुन सकेन ।
खानपिन : हामीले खाने खाद्य पदार्थ चेकजाँच गरिएको छ ? हामीले खाना खाएका छौं तर कस्तो खाएका छौ ? थाहा छैन । मिलावटको कुरा बेग्लै छ, कुन खाद्य पदार्थ कुन मितिमा उत्पादन भएको हो र कुन मितिसम्म खान हुने हो, कही कसैले चेकजाँच गरेको गराएको पाइएको छ ? सडकको छेउछाउ, ठेलागाडामा बेचिने फलफूल तथा खाद्य पदार्थमा कति धूलो मिसिदो होला । सुँगुरलाई राम्रो पानी र खाना चाहिँदैन तर मोटाएकै छ र मोटाएकै राम्रो मानिन्छ । हामीले खाने खाना सुँगुरको भन्दा फरक छैन । हामी सुँगुरभन्दा के फरक भयौं ?
पानीको गुणस्तर : जारमा भरिएको प्रशोधित पानी पिउने बाध्यता भइसकेको छ । त्यो पानी शतप्रतिशत पिउनयोग्य छ ? धाराबाट आउने पानी कपडा धुन र भाडा माँज्नको लागि मात्र उपयुक्त हो ? त्यो गुणस्तरको पानीले माझेको भाडा र पखालिएको तरकारी स्वास्थ्यका लागि सही हुन्छ ? हुन्न भने हाम्रो जीवनशैली सुँगुरभन्दा कसरी फरक भयो ?
जीवनशैली : दैनिक दाँत माझ्नु र मुख धुनु अनिवार्य भएजस्तै दैनिक स्नान पनि स्वास्थ्यका लागि त्यतिकै अनिवार्य छ । शरीरको दुर्गन्ध १/२ दिन अत्तरले हटाउन सकिएला, आफैसँग इमानदार त बन्नका लागि त दैनिक स्नान जरुरी छ । शहरको बासिन्दा भइसकेपछि जाडो या गर्मी भन्ने हुँदैन, मौसम अनुसार तातोचिसो पानी उपलब्ध हुनुपर्छ नै । जाडो र गर्मी घरबाहिर मात्र आएपछि मात्र थाहा हुने हो । भित्र तापक्रम एकनासको हुनुपर्छ । त्यो काम विद्युतीय उपकरण एयर कन्डिसनिङ सिस्टमले गर्छ । पसिना आउने कडा काम गर्नेलाई ज्यामी वा कुल्ली भन्ने संज्ञा दिने आम नेपालीले अबको जीवनशैली विलासी र आरामदायी बनाउनुलाई महान् ठान्छ । दैनिक व्यायाम, सन्तुलित खाना, मोटाइ र चर्मको ख्याल नराख्नु अहिलेको विकृत जीवनशैली हो । यही जीवनशैलीले अधिकांश नेपालीको अल्पायुमै मृत्यु हुने गरेको छ वा पक्षघातको रोगी भएर पश्चात्तापको जीवन गुजारिरहेको घटना छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । सुँगुरलाई आफ्नो फिगर मेन्टेन गर्नु छैन । जति मोटायो त्यति राम्रो र स्वस्थ । सडकको छेउछाउ, ठेलागाडामा बेचिने फलफूल तथा खाद्य पदार्थमा कति धूलो मिसिँदो होला । त्यसलाई खाँदा हामी सुँगुरजस्तै भएका छौं । सुँगुरलाई पनि राम्रो पानी र खाना चाहिँदैन ।
यात्रा : यात्रा भन्ने बित्तिक्कै माइक्रोबसको छिटोछरितो यात्रा सम्झनु उपयुक्त होला । सीटमा राख्दा १५ जना अट्ने माइक्रोबसमा २५ जना जतिलाई मिलाएर राखिन्छ र झ्यालबाट टाउको निकालेर ‘जाने हो ? टन्न खाली छ’ भन्दै यात्रु कोच्न शुरू गरिन्छ । कसको मुख कसको पिठ्यूँ वा कुन भागसँग जोडिएको हुन्छ, अपानवायु निष्कासन गर्दा मात्र थाहा हुन्छ । हामी सुँगुरभन्दा फरक छौं त ? । एकैछिन त हो, ट्याक्सीभन्दा कता कता सस्तो भनी सम्झौता गर्छौं । सबैको नियति उही हो । विरोध गर्दा एक्लो परिन्छ या नजाती भइन्छ किनकि सबैलाई हतार छ । विरोध गर्दा झगडा हुन्छ, त्यो कोही पनि चाहँदैन । सबैको हरेक दिनको हतारो र चटारो उस्तै हो ।
शौचालय : आम नेपालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी शौचालय र स्नानगृह तथा भान्साकोठालाई फरकफरक तरीकाले हेर्नु हो । सत्य के हो भने शौचालय भनेको विकार पदार्थ त्याग गरिने स्थान हो, जुन फोहोर हुन्छ, गन्हाउँछ । त्यसैले घर बनाउँदा पनि भर्‍याङमुनि या बचेखुचेको ठाउँ रोजिन्छ किनकि त्यो उच्च प्राथमिकतामा पर्दैन । हामीलाई यही सोचले सुँगुर बनाएको छ । वास्तवमा शौचालय यति सफा हुनुपर्छ कि कुनै गन्ध नै आउनु हुँदैन । तारे होटेलहरूमा बाहेक शौचालयलाई सफा राखिनुपर्छ भन्ने मान्यता कसैले बोकेको पाइएको छैन । रत्नपार्क वरिपरिका आकाशे पुलहरूमा त दिशा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छ । लामो यात्रा गर्दा रोकिने राजमार्गका रेस्टुराँहरूका हालतको वर्णन नै नगरौं । अरू त अरू, विदेशीहरूलाई भनेर तोकिएर रोकिएको ठाउँमा पनि शौचालयको स्तर खासै फरक पाइँदैन । रेस्टुराँ व्यवस्थापकहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि प्रायः विदेशीहरू शौचमा नरम कागज (पेपर) प्रयोग गर्छन् र धारो पनि हात मात्र देखाएर पानी आउने सेन्सर जडान गरिएको हुनुपर्छ । खुला शौच गर्ने नेपालीले हात धुन अनिवार्य ठान्दैनन् । नेपालीलाई यो स्तरको सफाइको हेक्का हुने बेला आएको छैन किनकि सुँगुरलाई स्वर्ग देख्नु छैन ।
मन्दिर नै मन्दिर भएको मुलुक सबैभन्दा सरसफाइमा सचेत नेपाली समुदाय हुनुपर्दथ्यो र अरू मुलुकका नागरिकले त्यो संस्कृति र सभ्यता पछ्याउनु पर्दथ्यो । हामी ३३ कोटी देवीदेवताको कुरा गर्छौं तर कर्म भने सुँगुरको जस्तै गर्छौं । फोहोरमा त पक्कै पनि ईश्वरको वास हुँदैन होला । हाम्रो देश सतीले सरापेको होइन, सुँगुररूपी जीवनशैलीले नै राक्षसहरूको वास र ईश्वरको उठिबास भएको हो ।
जलस्रोतको उच्च व्यवस्थापन र विद्युत्को प्रचुर उत्पादन तथा वितरण नहुँदासम्म राष्ट्र समुन्नत र जनता सुखी र खुशी हुन सक्दैनन् । जलस्रोतको व्यवस्थापन ठट्टा होइन । हाम्रो दृष्टिमा सुँगुर फोहोर र अरूको दृष्टिमा हामी सुँगुर भएका त छैनौ ?